Hewa oo helay tababar sannad ah ee saxafi dibadeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hewa oo helay tababar sannad ah ee saxafi dibadeed
La daabacay tisdag 15 december 2015 kl 15.20
Dhabbadii Nils Horner
Sawirka Hewa Abdelzadeh. Sawirle: Filip Jakobsson / SR
Suxufi ka howl-gala Radio Sweden ee lagu magacaabo Hewa Abdelzadeh ayaa ku guuleeystay inuu qayb ka noqdo muddo sannad ah 2016 tababarka suxufiyiinta ka soo warranta dalka dibaddiisa ee lagu sharfay suxufigii Nils Horner. Halka uu Hewa uga howl-geli jiray xarunta idaacadda ayuu laga bilaabo 11-ka bisha jannaayo ee sannadka foodda innagu soo haya uu ka howl-geli doonaa muddo sannad ah adduunka dacalladiisa.
- Xaqiiqdii, waad maqlaysaa sida ay u dhawaaqayso adduunka dacalladiisa, waana wax aad loogu farxo. Aad ayaanan ugu faraxsanhay suurtagalkaa.
Hewa Abdelzadeh ayaa ah maanta suxufiyiinta ka howl-gasha idaacadda Radio Sweden laanteeda luuqadda kurdiga, halkaasina oo uu sannadkii 2013 ka bilaabey howshiisa. 11-ka bisha jannaayo ee foodda innagu soo haysa ayuu bilaabi doonaa tababarkan sannadka socon doona, isagoona sheegay inuu ku sugnaa garoonka dayuuradaha ee dalka Beljimka kolkii uu telefoon ka helay madaxa laanta wararka dibadda Ginna Lindberg ku war-gelisay.
- Waxay i waydiisay inaan xarunta idaacadda ku sugannahey, hase yeeshee aan ku war-geliyay inaan dibadda joogo hase yeeshee aan Sweden ku soo socdo. Markaa ayay telefoonka igu war-gelisay anigoona darreemay sidiiyoo inaan caadka galey oo aan dhulka lugaha ka qaadey maskax iyo oogo ahaanba.
Howshan sannadka ee tababarka ayaa la bilaabay iyada oo lagu xusayo suxufi idaacadda dibadda uga soo shaqeeyn jiray ee Nils Horner, isagoona lagu diley dalka Baabuul ee caasimadda dalka Afgaanistaan oo uu shaqo ugu maqnaa sannadkii 2014. Hewa ayaa sheegay inuu ku farax-san yahay inuu suurtagal la mid ah dhabbadii Nils Horner uu qaado.
- Waa suurtagal aad u ballaaran, caalamkana kama uu jiro tababar midkan la mid ah inta aan la socdo, waana tababar aad u qiime badan, waana mid aan ku hanweeynahay sidii aan ku bilaabi lahaa.
Isha/ SR Ekot